moi: April 2017
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် အဖွဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်း ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ (AIPA) အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. PANTALEON D. ALVAREZ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံပွဲ အတွက် အကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (AIPA Preparatory Meeting for the ASEAN-AIPA Leaders’ Interface) နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ မျက်နှာစုံညီ တွေ့ဆုံပွဲ (ASEAN-AIPA Leaders’ Interface)သို့ တက်ရောက်ရန် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့Ninoy Aquino အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ဧပြီ ၂၇ ရက် ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားလမ်းရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ရုပ်ရှင်ပြခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 7:32 AM No comments:
ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီငါးခုနှင့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ တာဝန် ရှိသူများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရုပ်သံလွှင့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီငါးခုနှင့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ တာဝန်ရှိ သူများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင် သံကြား အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 7:30 AM No comments:
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေးအား လူတန်းစား အားလုံး လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရေး ဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲနှင့် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်ရရှိရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ဧပြီ(၁၉)ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်မြို့၊ Pan American Health Organization (PAHO)၌ ကျင်းပသော ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးနှင့်
Posted by moi at 7:58 PM No comments:
ကြေးမုံသတင်းစာ နှစ်(၆၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ
ကြေးမုံသတင်းစာကို သတင်းစာသမား လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများ တက်တက်ကြွကြွဖြင့် စုပေါင်းပြီး ထူထောင်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ မြန်မာ့သတင်းစာလောကတွင် တကယ်ပြောင်း လဲသွားသော သတင်းစာ တစ်စောင်အဖြစ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း နယူးဇီလန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall အား တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန် သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Steve Marshall အား ယနေ့နံနက်(၉)နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
မနီလာ၊ ဧပြီ ၂၈
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် အကြိမ်(၃၀) မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာပြီး ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မနီလာမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
Posted by moi at 7:25 PM No comments:
စစ်တွမြို့၌မြန်မာ့လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
စစ်တွေ ဧပြီ ၂၈
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ မြန်မာ့လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီအချိန်က အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အများပြည်သူသုံးစွဲရန်မသင့်သည့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများ သထုံတွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီး
သထုံ ၊ ဧပြီ ၊ ၂၈
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မြို့နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီမှ အများပြည်သူသုံးစွဲရန်မသင့်သည့်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ သိမ်းဆည်း ထားသည့် သက်တမ်းလွန်ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးအတုများ၊ မှတ်ပုံတင် ထားခြင်းမရှိသည့် ဆေးဝါးများ နှင့်
Posted by moi at 2:34 PM No comments:
စိမ့်စမ်းရေသွယ်လုပ်ငန်းများ လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းနှင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဖဲလျားကျေးရွာ၌ ပြုလုပ်
လွိုင်ကော် ဧပြီ ၂၈
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေကျပ် (၁၅၉)သန်းဖြင့် ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန(ရေအရင်းအမြစ်)မှ ဆောင်ရွက်သည့်
Posted by moi at 2:31 PM No comments:
ချောက် ဧပြီ ၂၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်တွင် အမှတ်(၁၃)ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ တန်ဖိုးသင့် အာဟာရပြည့်ထမင်းနှင့် ဟင်းလျှာများကို ချောက်မြို့ပေါ်ရှိ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ကားများနှင့် နယ်လှည့်ရောင်းချခြင်းကို ဧပြီလ ၂၈ ရက် နံနက်(၈) နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by moi at 2:27 PM No comments:
A delegation led by Speaker of the Pyidaungsu Hluttaw Mahn Win Khaing Than left by air for the Philippines yesterday to attend the ASEAN parliamentary leaders coordination meeting and 30th ASEAN Summit in Manila, from 27 to 30 April.
Action being taken against bus drivers violating rules
Daw Nilar Kyaw, the minister for electricity, industry and transport of the Yangon Region Cabinet, said strict action will be taken against YBS Bus Lines that fail to abide by traffic laws.
Five suspects detained in Buthidaung Township
ACTING onatip-off, security forces detained five men on suspicion of receiving terrorist training in Lodesar Khai Village of Buthidaung Township on Wednesday.
A workshop on Public Service Media (PSM) jointly organised by the Ministry of Information, Myanmar Journalists Association and the Article 19 for materialising the Public Service Media Bill took place at the hall of the ministry in Nay Pyi Taw yesterday morning.
Myanmar, ROK sign technology agreement
A ceremony to signaMemorandum of Understanding on Technology Advice and Solutions from Korea (TASK) between the Ministry of Industry and the Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) was held at the Kempinski Hotel in Nay Pyi Taw yesterday morning.
The Chin State cabinet is promoting tourism based on Lake Reed, and have found that most of the tourists are from the neighbouring country of India, said the State Hluttaw representative from Haka town.
Reforestation by private sector and government
The forestry department will plant 36,000 acres of forest per year while private sector will plant 28,000 acres of forest per year beginning in the 2017-2018 fiscal year, according to the forestry department.
International Modern Technology and Machinery Expo to be held in Mandalay
An international modern technology and machinery expo will be held from 23 to 25 May in Kanaung hall at the Industrial Zone in Mandalay, according to an official from Exhibition Organising Committee.
Intellectual Property Laws need awareness promotion
Intellectual property laws such as industrial design, invention trademarks and literature and artistic patent rights need awareness promotion in Myanmar, because onlyafew people know that intellectual property laws even exist, according to Daw Swe Zin Htike, vice chairperson of Intellectual property entrepreneurs’ association.
ICRC delegation visits Buthidaung in Rakhine State
A 10-member delegation led by Mr. Jacque Ducros De Lafarga De Romefort from the International Committee of the Red Cross visited Buthidaung Prison in Buthidaung, Rakhine State yesterday morning.
Raw opium seized in Tangyan
An anti-narcotics squad from Tangyan stopped and searchedamotorcycle ridden by Ma Nan Kham Aung near Pin Taing,asmall-vehicle passenger gate in Ward 3, Tangyan on Wednesday.
Illegal goods worth Ks16.93 billion seized in fiscal year 2016-2017
Illegal goods worth Ks16.92 billion were seized in fiscal year 2016-2017, said an official from the Ministry of Planning and Finance on 24 April atameeting which held at the Ministry of Information in Nay Pyi Taw to clarify matters regarding the ministry’s performance during their first year.
USDA forecasts gains in rice, corn production in Myanmar
The Foreign Agricultural Service (FAS) of the U.S. Department of Agriculture (USDA) said that rice and corn production in Myanmar is expected to increase in the 2016-17 marketing year, while production of wheat is forecast to fall.
Mizorams southernmost Lawngtlai has banned import of pigs and piglets from neighbouring Myanmar and Bangladesh.
Private companies to be granted all types of insurance
Private insurance companies will be allowed to offer all types of insurance, according to U Kyaw Win, the Union minister for planning and finance.
Vice President U Henry Van Thio, Chairman of the Central Committee for the Development of the National Tourism Industry, addressed the co-ordination meeting of the committee and pointed out the importance of improving, expanding and refining the country’s tourism sector.
The opening ceremony of the 9th meeting of The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Sub group on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism was held at Novotel Hotel in Yangon yesterday morning.
Pyithu Hluttaw Speaker receives Swiss Ambassador to Myanmar
Speaker of the Pyithu Hluttaw U Win Myint received Swiss Ambassador to Myanmar Mr. Paul R. Seger at the hall of the Pyithu Hluttaw Building in Nay Pyi Taw at 11 am yesterday.
President U Htin Kyaw accepts credentials of ambassadors of Thailand and Belgium
Mr. Jukr Boon-Long, the newly-accredited Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of the Union of Myanmar, presented his Letter of Credence to U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, at the Presidential Palace in Nay Pyi Taw at2pm yesterday.
Fire destroys religious building in Yathedaung Township, Rakhine State
A fire broke out in Zedi Pyin village in Yathedaung Township, Rakhine State yesterday at 10 pm, destroyingareligious building.
Stabbing in Yathedaung Township, Rakhine State
Ma Phyu Ma Gyi, 28, and her daughter Ma May Phyu Thant, 11, were attacked by an unknown man wieldingaknife in Oak Pho village in Yathedaung Township, Rakhine State on Tuesday.
မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မ စီမံကိန်းရှိပြီးဖြစ်
နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးပွားဘ၀များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အရေးကြီး ဦးစားပေးကဏ္ဍ (Urgent Priorities) များတွင် ခရီး သွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်နေကြောင်း အမျိုးသားခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ကပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သော မစ္စတာ ဂျတ်ခ်ဘွန်လုံသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သော မစ္စတာ ဖိလစ်ခရီဒယ်လ်ကာသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် လည်းကောင်း နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၌ ၎င်းတို့၏ သံအမတ် ခန့်အပ်လွှာများကို ပေးအပ်ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paul R. Seger အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paul R. Segerအား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မိတ္ထီလာမြောက်ကန်မှစိုက်ပျိုးရေးရေပေးဝေရာတွင် ရေများလေလွင့်မှုနည်းပါးစေရန် ရေပေးမြောင်းမကြီးအား ကျောက်လိုင်နင်စီခြင်းနှင့် မြေထိန်းနံရံများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီး
မိတ္ထီလာ ဧပြီ ၂၆
မိတ္ထီလာမြို့နယ်၌ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာမှ မိတ္ထီလာမြောက်ကန်မှစပါးများ စိုက်ပျိုးရေးရေပေးဝေရာတွင် ရေများလေလွင့်မှု နည်းပါးစေရန် ရေပေးမြောင်မကြီးအား ကျောက်လိုင်နင်စီခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တူးမြောင်း နယ်နိမိတ်ခြံစည်းရိုးများ ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေပေးဝေရာတွင် ရေအလေအလွင့်နည်းပါစွာဖြင့် ပေးဝေနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာပြည်မှ အော်ဂျီးယန် မြင်းဇောင်းများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးမြစိန်(ပုသိမ်) (သံအမတ်ကြီး ဦးမြစိန်)က N.N ကလောင်အမည်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးခဲ့ရာ ဆောင်းပါးတွင် ကိုအောင်ဆန်း ကျောင်းမှထွက်ပြီး တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ဝင်ရောက်၍ အစည်းအရုံး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ်က ကြီးလေးသောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရကြောင်း အခုလိုရေးသားထားသည်။
ဒဏ္ဍာရီထဲက ငွေတောင်ပြည် အလည်သွားကြမည်
သတင်းဆောင်းပါး- စိုးစိုးနိုင်(ကြေးမုံ)၊ ဓာတ်ပုံ-မင်းခန့်စိုး(ကြေးမုံ)
ဆန်းကြယ်လှပသည့် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု၊ ရိုးရှင်းလှသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များ၊ ထူးခြားသည့် သဘာဝလိုဏ်ဂူ၊ ရေကန်များနှင့် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ရပ်များတည်ရှိရာ အထင်ကရနေရာများကြောင့် ကယားပြည်နယ်သည် ပြည်တွင်းသာမက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏အာရုံကို ဖမ်းစားနေသော စိတ်ဝင်စားစရာ ဒေသတစ်ခုအဖြစ် ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့သည်။
တကယ်တော့ ၁၇ နှစ်ဟူသည်မှာ ပြန်လှန်စဉ်းစားလိုက် တော့ တစ်နေ့မနေ့ကပဲဟု ထင်မှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ယခုနေရာလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခဲ့တာ ၁၇ နှစ်တဲ့။ ၁၇ နှစ်ဆိုတာ လူပျိုပေါက်အရွယ်ပဲ။ ပညာရေးအရပြောလျှင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ခိုင်မာမှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ခြေချမြဲမြံနေရမယ့် ကာလပေပဲ။
စိန်ပန်းပွင့်၊ အသားကင်ညှော်နှင့် မိတ္တူလမ်းမတော်
ငယ်ငယ်ကတော့ ယဉ်ပျံရွာ အနောက်နားက ရေနီမြောင်းရောက်သည်ဆိုလျှင်ပင် ကွင်းပေါ်ကလေ၊ ကောက်သင်း ရနံ့၊ ချောင်းပေါ်က ပတပ်နှင့် ရှမ်းရိုးမညို့ညို့ကို လွမ်းမောစွာ ခံစားနေရတော့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်လျှင် သို့မဟုတ် ကျောင်းပြေးကြလျှင်သို့မဟုတ် ရည်းစားနှင့် ချိန်းချက် စကားပြောလျှင် ထိုနေရာများကား မြို့ပြနှင့်ဝေးလှချေပြီ။ လူသူကင်းဝေးလှပြီ။ တောနှင့် တောင်ရိပ်များ မွှမ်းထုံလှချေပြီ။
State Counsellor to attend 30th ASEAN Summit and related meetings in the Philippines, pay official visits to EU countries
At the invitation of His Excellency Mr. Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines, Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar will leave for the Republic of the Philippines to attend the 30th ASEAN Summit and Related Meetings to be held on 29th April 2017.
Peace negotiators hold press conference on National Level Political Dialogue for Shan State
A press conference on National Level Political Dialogue for Shan State took place in Taunggyi, Southern Shan State yesterday.
Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than met with Vietnamese Ambassador to Myanmar Dr. Luan Thuy Duong at the hall of the Amyotha Hluttaw in Nay Pyi Taw yesterday morning.
A paper-preparing committee combined the papers submitted by representatives from political parties, the self-administered regions and zones according to set frameworks and rules into three state level papers — one political paper, one paper on the economy, one paper on land and environment — and these three papers were read out on the third day of the National Level Political Dialogue for Shan State.
The Myanmar delegation led by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who is currently onaworking visit to Austria visited Diamond Aircraft Industry at 3:00 pm local standard time on 24 April.